Iphrofayili yenkampani - Genzon
Izinto ze-Novel ze-Genzon
Isungulwe ngonyaka ka-2017, iSuyyang Genzen Novel Equipment Co, Ltd. (ngemuva kwalokhu okubizwa nge- "GENZON Novel Equipment") ilawulwa yiGENZON GROUP nayo ephethe ukuphatha nokusebenza kwayo.
I-Genzon Novel Equipment iyibhizinisi eliphezulu lobuchwepheshe elikhethekile emkhakheni wezinto zokwenza i-polymer, lihlanganisa umkhiqizo we-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa ngezinhlobonhlobo zemikhiqizo nezigaba eziphelele. Ifilimu ye-polyester eyakhiwe ngokuzimela futhi ekhiqizwa yinkampani ingasetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene yezimboni efana nokufaka i-aluminium, ukuphrinta, ukuvikelwa kwamakhadi, i-bronzing, ukukhipha, igolide nesiliva wire, ifilimu ye-kink, ukungavunyelwa kwamanzi, njll. Ngokuzayo, inkampani uhlela ukwandisa ukusetshenziswa kwezinto zokuphinda zisetshenziswe kabusha.Umanje, inkampani inezinkulungwane ezingama-18 zokukhiqiza amathoni we-polyester, ama-4 ama-donier ase-Germany aqondile ancibilikisa imigqa yokukhiqiza ifilimu eyi-biaxial kanye nomugqa ongu-1 wokuhlola wasekhaya. Ingumnikazi wezisekelo zokukhiqiza kanye nezisekelo ze-R&D eJiangsu nakwezinye izindawo.
Ngokuzayo, iGenzon Novel Equipment izosuselwa ekubukeni kwamazwe omhlaba ukwakha umkhiqizo waseChinese futhi ilwele ukuba ngumholi embonini entsha yezinto ezibonakalayo ngokuhlanganisa izinzuzo ezikhona, ukuqinisa ukuqalwa okuzimele, nokukhulisa izinto zokuhlanza nezokuzihlanzela ngemvelo ezintsha.
IGenzon Investment Group
IGenzon Investment Group Co, Ltd. (i- "Genzon") yasungulwa ngoDisemba 2003. Inhloko yayo ebekwe eShenzhen, iGenzon inabasebenzi abangaphezu kuka-5,000 ezweni lonke. Isikhundla njengomhlinzeki wesevisi embonini ephezulu yobuchwepheshe, iGenzon ibamba iqhaza kakhulu ekutshaleni imali yezimboni, ukuthuthukiswa kwezakhiwo zezindawo zezimboni, ukwakhiwa kanye nokusebenza kwamakhampasi ezimboni, phakathi kwamanye amabhizinisi.
Mayelana nokutshalwa kwezimboni, iGenzon ithuthukisa kwezemithi, okokusebenza okusha nokwenziwa kwensimbi okunomgomo wokuthuthuka wokwabiwa kwezinsiza okusekwe emakethe. Lapho, uWelmetal uzibophezele ekukhiqizweni nase-R&D yemikhiqizo emihle yensimbi, kuyilapho iGenzon New Equipment igxile emkhakheni wezinto ezenziwe nge-polymeric. Kukhona futhi namaphrojekthi amakhulu wemali eyimali kuphothifoliyo yeGenzon. Mayelana nokwakhiwa nokusebenza kwamakhampasi wezimboni, iGenzon igxila amabhizinisi ayo eGreater Area Area, futhi njengamanje iyazenzela futhi isebenza ngamakhampasi ezimboni ambalwa.
Eminyakeni eyishumi eyedlule, uGenzon unamathela emnyakazweni wokwenza i-ecosystem ephawuleka futhi uzinikela ukuze abe ibhizinisi elithembekile lokulinganisa. Ukubamba amathuba ngesikhathi sezinguquko ezinkulu kanye nokwakhiwa kabusha kwezomnotho eChina, i-Genzon, njengezikhathi zonke, izothuthukisa futhi isebenzise izimboni ezisezingeni eliphezulu futhi isekele ukuthuthukiswa kwezimboni ngezinsizakalo zayo ezinhle kakhulu zehhovisi kanye nezinsizakalo ezibalulekile. IGenzon Group isungule amaphothifoliyo aphethe imboni nezabahlali. Kuyo yonke le minyaka, yathuthukisa izakhiwo zebhizinisi, izakhiwo zamahhovisi, abahlali, amahhotela kanye negalofu leklabhu, futhi yathola izinzuzo ezihamba phambili nokuhlangenwe nakho ekuthuthukisweni kwezimboni nokuphathwa kwempahla.
UCWANINGO LWEZOBUCHWEPHESHE NOKUthuthuka
Iqembu eliphambili le-R&D, eliholwa udokotela ofundele eMelika, limiswe eSilicon Valley ukuthola ubuchwepheshe obuholayo emhlabeni
Isisekelo sokuhlola amafilimu asezingeni eliphakeme sisiza ubuchwepheshe bethu obuhle bokukhiqizwa, ukutadisha nokucwaninga
Ubuchwephesha obonakalayo bokuqothuka, ubuchwepheshe obungenziwa emhlabeni wonke obuzimele kanye nobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi ngokugunyazwa kwezifunda eziyi-15 kubandakanya iChina, iUS, iYurophu, neJapan neTaiwan.
Ukuvunywa kwephrojekthi kokutholwe ngophando lokutholwe ngocwaningo lwesiFundazwe saseJiangsu ngonyaka wezi-2014
Umklomelo wesibili wokugcina kumncintiswano weSithathu China Innovation kanye ne-Enterpriseurship Compaign - Novel Equipment Industry ngonyaka ka-2014
Sinethimba eliqeqeshiwe, elinolwazi futhi elisebenza kahle ukukhuthaza ukuthuthukiswa okusheshayo nokuqinile kwe-GENZON Novel Equipment ezintweni zokucwaninga kwezobuchwepheshe kanye nentuthuko, ukuphathwa kokukhiqiza, ukulawulwa kwekhwalithi, ukuphathwa kwezentengiso nokusebenza kwebhizinisi nokuphatha.
Ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwamathani angama-180,000 efektri engu-110,000m2
Imigqa emine yokukhiqiza ifilimu ye-Dornir kanye nelayini elilodwa lokuhlola elenziwe ekhaya
Izindawo zokusebenzela ezingaphansi kokuphathwa okujwayelekile kwe-6S